​‘जादुयी’ बलमा विराट कोहलीलाई आउट गर्दै शेन वार्नको सूचीमा मुजीब उर रहमान
Fri, Mar 22, 2019 | 17:47:44 NST
14:05 PM ( 11 months ago )
वैशाख १ – शुक्रबार राति किंग्स इलाभेन पञ्जाबसँगको प्रतिस्पर्धामा अन्तिम ओभरमा जित हात पार्दै रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर(आरसीबी) ले आईपीएलको सिजन ११ मा जितको खाता खोलेको छ ।
आरसीबीले पञ्जाबले दिएको १५६ रनको विजयी लक्ष्य ६ विकेट गुमाएर ३ बल बाँकी रहँदा भेट्टायो । आरसीबीको जितका लागि एबी डिबिलियर्सले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै महत्वपूर्ण भूमिका खेले । उनले ४० बलमा २ चौका र ४ छक्काको सहयोगमा ५७ रन बनाए । त्यस्तै क्विन्टन डी ककले ३४ बलमा ७ चौका र १ छक्काको सहयोगमा ४५ रन बनाउँदै आरसीबीको आधार तय गरेका थिए ।
आरसीबीका बलरहरुले पनि शुक्रबार उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । उमेश यादवले ४ ओभर बलिङ गर्दै मात्रै २३ रन दिएर ३ विकेट लिए । उमेशको प्रदर्शनले पञ्जाबलाई उच्च स्कोर तयार पार्न रोकेको थियो ।
शुक्रबारको खेलमा पञ्जाबले हारे पनि पञ्जाबका एक जना बलरले विश्वको ध्यान आकर्षण गरे । हो, अफगानी स्पिनर मुजीब उर रहमानले हिजो उत्कृट बलिङ गर्दै विराट कोहलीलाई क्लिन बोल्ड गरे ।
१५६ रनको मामुली विजय लक्ष्य पछ्याएको आरसीबीले सुरुमै ब्रेन्डन म्याककलमलाई गुमाएको थियो । त्यसपछि क्रिजमा आएका कप्तान विराट कोहलीले डी ककसँग मिलेर रनको गति बढाइरहेका थिए । उनले १६ बलमा २१ रन बनाए । जसमा ४ चौका थियो । तर आरसीबीको पारीको पाँचौ ओभरमा पञ्जाबका कप्तान रविचन्द्रन अश्विनले बलिङको जिम्मा दिए टिमका युवा स्पिनर मुजीब उर रहमानलाई ।
१७ वर्षीय अफ् ब्रेक बलर मुजीबले विराट कोहलीलाई अफ् स्टम्पको बाहिर गुगली बल फ्याँके । कोहलीले यसलाई ड्राइभ गर्ने प्रयास गरे । तर ब्याट र उनको खुट्टाको बीचमा बनेको ग्याप हुँदै बल सीधै स्टम्पमा लाग्यो । विराटको विकेट लिएपछि पञ्जाबी टिममा एक किसिमको जोश देखिन्थ्यो ।
Not many spinners in world cricket got through the gate of Virat Kohli. More so when Virat has hardly got out to spinners in IPL in the last few years. This isaripper from Mujeeb.
GIF Credits: @hotstartweets pic.twitter.com/VFK84QAPSI
— Ravi Maestri (@ravimaestri) 13 April 2018
त्यति मात्रै होइन, कम उमेरमै विराट कोहली विकेट लिँदै मुजीब उर रहमान आईपीएल इतिहासमा शेन वार्न, पियुष चावला, नितिश राणा तथा सुनिल नारायणपछि विराटलाई आउट गर्ने पाँचौ स्पिनर बनेका छन् ।
मुजीब उर रहमानलाई पञ्जाबले चार करोड भारतीय रुपैयाँमा किनेको थियो । उनले यो सिजनमा दुई खेलमा ३ विकेट लिँदै आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् ।